Archive du 20180725
Hery Rajaonarimampianina Nataon’ny olona tohatra fiakarana fotsiny
Tsy misy mihitsy filoham-pirenena hisafidy ny hanaotao foana hanimba tena mandritra ny fitondrany fa ao raha matoa tsy mahomby. Iankinan-javatra ny ekipa ao anaty fitondrana satria tsy vitany irery io.
Hetsiky ny HFI Amin’ny zoma indray
Efa nampoizina ihany ny zava-nitranga tetsy amin’ny Parvis Analakely omaly. Nahagaga ny maro ihany hoe naninona ireo fikambanana sy antoko ary vondrona tapa-kevitra ny hanohy ny tolona etsy amin’ny kianjan’ny 13 mey mivondrona ao anatin’ny HFI ka hanome anarana hoe tolona ho an’ny tena fanovana no tsy nangataka alalana mihitsy na tany amin’ny prefektiora na teo anivon’ny kaominin’Antananarivo Renivohitra ?
Fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana Tsy afa-manoatra ny CENI
Tsy afa-manoatra ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) manoloana ny fanatanterahana ny fampielezan-kevitra mialoha ny fifidianana raha ny tranga misy amin`izao fotoana, hoy ny filohan`ny CENI, Hery Rakotomanana.
Fifankahalana sy fifanalam-baraka Efa fomba fiadin’ny MAPAR sy HVM hatrizay
Ny ekipan’ny tetezamita sy ny HVM no tena manam-pahaizana amin’io politikan’ny fankahalana sy kapa vavaranjo io, ary manomboka tsy misy ankitsitsy izy io amin’izao vanim-potoana akaiky fifidianana izao. Mahavita mamorona ny tsy misy mihitsy hahafahana manenjika sy manasoketa ny hafa sy hanapotehana azy.
Pastera Mailhol Tohanan’ny mpampianatra
Vonona ny hanohana an’ny pastera Mailhol ireo mpampianatra eto amintsika amin’ny fifidianana filoham-pirenena hotanterahina ny volana novambra ho avy izao.
Maitre Willy Razafinjatovo na Olala Miantso fifanatrehana amin’ny filohan’ny holafitra
Na “conseil de discipline” na “ commission de discipline”, izay hiantsoana azy, hoy ny mpisolovava, Willy Razafinjatovo na Olala dia tokony hisy fampahafantarana ny antony iantsoana izay hampanantsoina foana,
Lalao baolina kitra teny Talatavolonondry Nahatontosa ny fanambiny ny Tanora TIM
Notanterahina ny alahady 22 jolay 2018 lasa teo ny lalao famaranana taranja baolina kitra, nokarakarain'ny Tanora Tiako i Madagasikara (Jeune TIM) ao Talatavolonondry.
Fampitsaharana ny tolon’ny mpampianatra Ho avy ny fampiasan-kery ?
Nogiazan'ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ny fanamafisam-peo dia notapahana ny herinaratra, ka nanao tsipaipaika izahay ary nahazo fanamafisam-peo vaovao, hoy ireo sendikan’ny mpampianatra mitaky ny zony etsy amin'ny tokotanin'ny Minisitera etsy Anosy.
Adina ara-panatanjahantena bakalorea Savorovoro ny tao Toamasina, tsy vita ny tao Brickaville
Vao maraina dia efa nameno ny kianjabe nikasana hanaovana ny adina ara-panatanjahantena tao Brickaville ireo mpampianatra mpikambana eo anivon’ny Sempama any an-toerana.
Canal plus Madagascar Hanome vahana ny sarimihetsika Malagasy
Tsy fahita any anatin’ireny fahitalavitra avy any ivelany ny horonantsary Malagasy hatramin’izay. Hanomboka hisy eto amintsika izy ankehitriny.
Fidangan’ny vidina lavanila Tokony ho tohana lehibe ho an’ny vola Malagasy
Nanomboka ny taona 2016 dia niakatra be mihitsy ny vidin’ny lavanila satria avo folo heny na 15 mihitsy aza.
Sehatra fambolena eto Madagasikara Mila mivoatra ny tantsaha
Omaly talata 24 jolay no nampahafantarina tetsy amin’ny Hotely Le Louvre Antaninarenina ny fisian’ny foara be andiany faharoa ho an’ny fambolena (FIA) ny 14 hatramin’ny 17 septambra ho avy izao.